Mizotra miadana ao Karaiba ny rivodoza Dorian, saingy mety mbola hahatsapa ny hatezerany ihany i Bahamas · Global Voices teny Malagasy
"Tsy vonona i Bahamas...ny handray rivodoza sokajy faha3/4"
Voadika ny 08 Septambra 2019 17:05 GMT
Sary ISS060 nasiam-panovàna mampiseho ny Rivodoza Dorian miala ny Repoblika Dôminikana ny 29 Aogositra 2019. Sary nasian'i Stuart Rankin fanovàna ary navoakany, CC BY-NC 2.0.
Raha mihamafy ho Sokajy fahefatra ny Rivodoza Dorian, ilay tafiodrivotra goavana voalohany indrindra tamin'ny vanimpotoan'ny rivodoza tao Atlantika tamin'ity 2019 ity, dia ampahany maro amin'i Karaiba no misento satria tsy mafy toy izany ny herin'ilay tafiodrivotra rehefa namakivaky ireo Nosy Virijiny Amerikana sy nisafo an'i Puerto Rico tamin'ny 28 Aogositra. Naminavina ireo mpahay toetrandro fa mety hiakatra ho Sokajy fahadimy ilay tafiodrivotra amin'io izy mizotra ho any Florida io:
Saika lavorary toy ny rivodoza lasa ao amin'ny Ranomasimbe Atlantika izy ity.
Sokajy fahefatra matanjaka ny Rivodoza #Dorian , ary mety hivadika ho Sokajy fahadimy anio hariva.
Loza mitatao ho an'ny avaratr'i Bahamas izany.
Hatramin'ny fitetezany ny faritra, nitombo hery sy vaika i Dorian. Niforitra i Bahamas ary mivonona amin'ny toetrandro ratsy, satria hinoana fa hitohy manaraka ny avaratra andrefan'ilay vondro-nosy ny làlan'ilay tafiodrivotra. Heverina fa hivalapatra hatrany amin'ny 45 km miala ny ivon'ilay tafiodrivotra ireo rivomahery aterany, hitondra orana 25 ka hatramin'ny 38 santimetatra any amin'ny faritra avaratra andrefan'i Bahamas ary 5 ka hatramin'ny 10 santimetatra any Bahamas afovoany—toejavatra izay mety hiteraka tondradrano tampoka sy famoizana ain'olona.
Namoaka ity manaraka ity tao amin'ny Facebook i Holly Bynoe, mpitahiry ao amin'ny Tranom-pirenena Fampirantiana Zavakanto ao Bahamas:
Tsy vonona handray tafiodrivotra i Bahamas–mainka moa fa rivodoza goavana sokajy faha3/4–tsy vonona aminà orana an-tsantimetatra vitsy akory aza izahay. Tsy afaka hiaina io dona io, indray, ireo nosy avaratra sy ny vahoakany. Raha ity, toa sady tsy mety tapitra no tsy mamela mahazo.
Notohizany izany tamin'ny fanoritsoritana ireo tafiodrivotra rehetra nandratra ilay vondro-nosy, ireo faharavàna mitentina an-davitrisa dôlara naterak'izany, sy ireo ezaka efa taraiky mieritreritra ny hampiasa vola aminà angovo maitso sy fotodrafitrasa mafy kokoa:
Fantatro fa vetivety dia miarina isika, ary aty Karaiba, anatin'ny ràtsika izany. […]
Kanefa, tsy maintsy mametra-panontaniana hafa amin'ny tenantsika isika ankehitriny, manao fanadihadiana lalina kokoa mikasika ny hoavintsika, ireo firenena tiantsika hobodoina, ireo toerana tiantsika hatsangana, ilay fandriampahalemana tiantsika hiainana sy ireo olompirenena FENO tiantsika hotratrarina. Raha tsy izany, ho latsaka anatin'ny fandriky ny maha-vahoaka voadona antsika hatrany isika isaky ny taranaka mifandimby, izay mandroso mankany aminà hoavy ahitàna fiakaran'ny haavon'ny ranomasina sy ny maripana ary ny fanjanahana amin'ny alàlan'ireo rafitry ny tsy fahombiazana efa miaraka aminy.
Mandritra izany fotoana izany, namoaka baiko famindràna amin'ny toerana azo antoka kokoa ny Praiminisitr'i Bahamas, Hubert Minnis, tany amin'ny faritra sasany ao Grand Bahama sy ireo Nosy Abaco, nilaza fa tafiodrivotra tsy tokony hosangisangiana izy ity.
Namaly io vaovao io i Bynoe tamin'ny fitenenana fa:
Mandohalika aho mivavaka mba hieren-doza ny vahoaka andalovan'ity tafiodrivotra ity ao Abacos sy Grand Bahama. Vao nijery ilay filazàna famindràna toerana aho ary tsy takatry ny saiko sy ny foko izay mety hiseho ato anatin'ny 48 ora ho an-dry zareo. Horohoro mahatsiravina mandritra ny fiomanany amin'ny fihotsahan'ny tany.
Tsy mandalo manitsy an'i Nassau i Dorian kanefa tafiditra anatin'ilay kitsoloha izahay ary hiatrika ireo toejavatra misy mandritra ny tafiodrivotra trôpikaly. Toa tsy rariny ny filazàna fa vintana izao manoloana izay zavatra hitranga.
Tsy nampihemotra ilay Amerikana mpihaza rivodoza, Josh Morgerman, anefa ny tanjak'io rivodoza io, izay tapa-kevitra ny ho any Bahamas mialoha ny nanidina ny làlana:
Lasa izao. Sidina farany any amin'ireo Nosy Abaco ao Bahamas mialoha ny hanidiana azy. Tena halako amin'ny foko manontolo ny Nosy Roulette. Saingy halako ny mijaridina mandritra ny telo andro sy hilelaka kokoa ireo sisiny vasoka amin'andohalambo efa miharava. Mety tsy hahomby aho amin'ity haza ity. Tsy olana.
Toa mivily mianavaratra kokoa i Dorian, na dia lasibatra aza i Bahamas. Saingy amin'ny maha-tafiodrivotra mandeha miadana dia miadana azy dia toa mampisy eritreritra fa mety ho io no tafiodrivotra mahery indrindra nidaroka ny morontsiraka atsinanan'i Etazonia tanatin'ny 30 taona.